Archive du 20170930
Trafikana Boaderozy Mpandraharaha 3 ho samborina
Netsehan’ny birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco) ny raharaha boaderozy ka nisy ny famoahana anaran’olona telo mianadahy miaraka amin’ny didy fampisamborana azy ireo navoaka nanomboka omaly.
Fitondrana Rajaonarimampianina Midera tena hatrany
Tonga nitokana ny tsena tany amin’ny kaominina Marovantana sy lycee tany amin’ny kaominina Anahindrano, distrikan’Antsohihy, faritra Sofia ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, omaly.
KMF/CNOE Miangavy ny fanatsaharana kajy politika
Namoaka fanambarana omaly ny avy eo anivon’ny KMF/CNOE izay sampandraharaha misahana ny resaka fanabeazana ny olom-pirenena eto amintsika fa manoloana ny toe-draharaham-pirenena
Filohan’ny antenimierandoholona Nihaino ny fitarainan’ny tao Sambirano
Dinik’asa miompana tamin’ireo olana misy sy sedrain’ireo vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana manoloana ny fanatanterahana ny asany no notontosain’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rakotomanana Honoré
Conseil du Fampihavanana Malagasy Miandry ny fankatoavan’ny HCC ny Fitsipika anatiny
Mandalo fandinihana eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana (HCC) raha mifanaraka na tsia amin’ny lalàmpanorenana ny fitsipika anatin’ny Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM).
Taratasin’i Jean Miavonavona i Jeanne
Mahafatifaty ahy ry Jean iny Jeanne anabavinao iny marina ! Tsininy fotsiny dia ity izy te ho vedety eran’ny tanàna ity hany ka mihevitra fa azony hiavonavonana daholo ity olon-drehetra ity.
Famoahana tsaho amin’ny facebook Raikitra ny fanenjehana
Feno 56 taona anio 30 septambra 2017 ny naha polisim-pirenena Malagasy ny polisim-pirenena Malagasy.
Mpiantsehatra an- dranomasina Mitaky tombontsoa manara-penitra
Rehefa avy nandalo tany amin’ny faritra nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ranomasina 2017 nanomboka ny 28 septambra 2017
CNaPS Hanakaiky hatrany ireo olona marefo
Hanakaiky hatrany ireo olona marefo sy sahirana ara-pivelomana, indrindra fa ireo mpikambana ao aminy mila fanampiana amin’ny fiatrehana ny fiainana ny CNaPS.
Indonezia Liana amin’ny harena any Vakinankaratra
Nitsidika an’i Vakinankaratra ny mpiandraiki-draharaha vaovaon’ny Firenena Indonezianina eto Madagasikara omaly zoma, io no fitsidihina voalohany nataony hatramin’ny nahavoatendry azy eto Madagasikara.
Kaominin’Antananarivo renivohitra Nizara haitondra ho an’ny tanora
Naharitra dimy andro ny atrikasa niarahana tamin’ireo mpianatry ny Universite Iscam ( Institut Superieure de la Communication des Affaires et du Management) ka ny kilasy Master 1 sy Master 2 sampam-pianarana “Design Thinking”, no nanantanteraka izany.
Fidorohana zava-mahadomelina Sekoly maro no efa vonona hiady aminy
Samy manomana paikady hahafahana miady amin’ny fidorahana zava-mahadomelina avokoa amin’izao fanombohan’ny taom-pianarana vaovao izao ny ankamaroan’ireo sekoly eto an-drenivohitra.
Marc Tatandraza Hihaona amin’ny filoham-pirenena
Ambivitra ny fotoana hialan’i Marc Tatandraza na Apostoly Tatandraza, eto ambonin’ny tany.
Tsy vonon-kiova daholo
Ny eo ihany no eo. Izay no azo hamehezana ny zava-misy iainan’ny firenena amin’izao fotoana izzao amin’ny lafiny rehetra.
Adin’ny amin’ny Pesta Miasa mafy ny BMH
Anisan’ny aretina iray voaresaka matetika tato ho ato ny aretina Pesta. Ankoatra ireo toerana voalaza fa nahitana izany dia mbola voakasika hatrany isika eto Antananarivo renivohitra.
BNI sy TELMA Hiara-kiasa hanala fahasahiranana ny mpanjifa
Hiara-kiasa akaiky manomboka izao ny Banky BNI Madagascar sy ny orinasa Telma amin’ny alalan’ny M Vola.
Ady amin’ny asan-jiolahy Ampitomboana isa ny zandary alefa any ambanivohitra
5 andro nanomboka ny alatsinainy teo ary nifarana omaly no nikaonan-dohan’ireo lehiben’ny zandarimaria manerana ny nosy mba hijerena izay paikady vaovao ahafahana mamaha ny olan’ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara.